Mareykanka: Maxamed Bin Salmaan ayaa amray dilka Jamaal Khaashuqji
Waa markii ugu horraysay oo arrinta la xiriirta dilka Jamaal Khaashuqji uu Mareykanka si cad u sheego magaca amiirka dhaxalsugaha ah, kaas oo diiday inuu armay dilka.
Mareykanka oo shaaca ka qaadaya warbixin xasaasi ah oo ku saabsan dilkii Jamaal Khaashuqji
Maxamed Bin Salmaan badbaado maka heli doonaa Biden?
Dhageyso, Sababta xilka ugaaska Xawaadle uu si ku meel gaar ah ugu sii haynayo ugaaska Ceyr?, Muddada 4,30
Sababta xilka ugaaska Xawaadle uu si ku meel gaar ah ugu sii haynayo ugaaska Ceyr
Waa kuma Maxamed Bin Salmaan?
Marka la eego Sacuudiga dibaddiisa, dad kooban ayaa yaqaannay magaca Maxamed Bin Salman Aala Sucuud, ka hor inta uusan aabihiis boqorka noqonin sannadkii 2015-kii.
Saameynta ka dhalatay dagaalka xuduudda ee Suudaan iyo Itoobiya
Qoxootiga Itoobiya ka soo jeeda ee ku sugan magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa sheegay iney noolashooda khatar soo food saartay maadaamaa adeegyadi oo dhan laga joojiyey.
TOOS "Maxamed Bin Salmaan waa in cunaqabateyn lagu soo rogaa"
Golaha ammaanka oo cunaqabateeyey hoggaamiyeyaal ka tirsan Al-Shabaab
Japan: Dood ka taagan in magaca laga beddelo lammaaneyaasha guurka kaddib
Wasiirka Sinnaanta Jinsiga ee dalka Japan ayaa ka soo horjeesatay sharciga lammaanayaasha in magac gaar ah loo bixiyo guurka kaddib.
Madaxwaynaha Nigeria oo si kulul uga hadlay afduubka caruurta iskuuleyda ah
Madaxweynaha Nigeria Muxamaduu Buhari ayaa sheegay in dowladdiisa aanay u jilci doonin handadaadda uga imanaysa kooxaha dambiilayaasha ah ee bartilmaameedsanaya carruurta iskuulayda ah ee aanan waxba galabsan.
Maxay tahay hawsha guddiga ay ku heshiiyeen mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya?
Qodobbada ay ku heshiiyeen labada dhinac waxaa ka mid ahaa in maanta oo Jimce ah la baajiyo mudaharaad lagu waday in ay mar kale qabtaan hoggaamiyeyaasha kasoo hor jeeda xukuumadda.
Eritrea oo hadal kasoo saartay xasuuq loo heysto in ay ka geysatay Tigray
Muxuu Mareykanka uga carooday diyaaradaha dagaalka ee uu Ruushka ka iibinayo Masar?
In ka badan 300 oo gabdho arday ah oo lagu afduubtay Nigeria
Sidan ayuu u dhacay xasuuqii laga gaystay magaallo qaddiimi ah oo ku taalla Itoobiya
Maxay tahay khatarta cusub ee uu keenay Geela Bariga Afrika?
Cilmi baareyaal ayaa Waqooyiga Kenya ka wada shaqo ay uga hor tagayaan in fayras halis ah - oo noociisu yahay Mers, oo ay qabaan geela uu mar kale usoo gudbo bani'aadanka. Laakiin howshooda waxaa adkeynaya isbaddalka Cimilada.
30 Jannaayo 2021
Xiga Dunida Iyo Maanta, 16:59, 27 Febraayo 2021
Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 27 Febraayo 2021
Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 27 Febraayo 2021
Dunida Iyo Maanta, 16:59, 26 Febraayo 2021